Saika haondrana antsokosoko any ivelany : zana-tsokatra 101 saron’ny ladoany, olona 2 voasambotra | NewsMada
Saika haondrana antsokosoko any ivelany : zana-tsokatra 101 saron’ny ladoany, olona 2 voasambotra
Par Taratra sur 16/03/2016
Voasoroky ny Sampandraharaha miadidy ny fanarahamaso sy ny ady atao amin’ny jiolahim-barotra na ny Service de la surveillance et de la lutte contre la contrebande (SSLC), ao amin’ny ladoany Malagasy, ny tetidratsy saika hanondranana antsokosoko zana-tsokatra miisa zato, any ivelany. Olona roa, omaly, no voasambotra, tompon’antoka tamin’izany.
Voasambotry ny Douane avy amin’ny Service de la Surveillance et de la Lutte Contre la Contrebande (SSLC) teny 67 ha, omaly ny olona roa nitondra zana-tsokatra miisa 101, izay saika aondrana antsokosoko any ivelany. Ny tompon-trano nametrahana ny entana sy ilay nitondra azy avy any Toliara ireto tratra ireto. “Tamin’ny alalan’ny mpaka “renseignement” ato amin’ny SSLC no nahafantarana ny fisian’ity fikasana hanondrana zana-tsokatra ity. Nidina teny an-toerana ireo mpiasan’ny douane ka tratra tokoa ireo”, hoy ny fanazavan’ny lehiben’ny SSLC, Randriamanantena Soja Christophe.
Tsy afaka nanda intsony ireo olona ireo fa tratra tao aminy ireo biby arovana ireo. “Any Asia no handefasana azy ireo, ity firenena ity koa matetika no manafatra itony karazam-biby itony”, hoy ny fanazavana. “Ezahina ny hanatratra any ifotony, izany hoe any amin’ny toerana anangonana ireny karazam-biby arovana ireny. Hisy ny fidinana any an-toerana hataon’ny SSLC”, hoy ihany ny fanamafisana.
Milaza fa manova ny fomba fiasa mihitsy ry zareo ao amin’ny douane amin’izao fotoana izao, amin’ny ady amin’ny fanondranana biby arovana, harena voajanahary sy fampidirana entana hafahafa eto amintsika. Anisan’izany izao nahazoana izao vokatra izao. Matetika eny amin’ny seranam-piaramanidina no ahatrarana zavatra tahaka izao, fa tamin’ity kosa, tany an-tranon’olona mihitsy. “Misakana, misambotra ary mandefa any amin’ny fitsarana izahay”, hoy Atoa Randriamanantena Soja Christophe.
Araka ny fanazavana ihany, atolotra ny fampanoavana, anio, ireo olona roa tratra tamin’ity resaka fikasana hanondrana zana-tsokatra an-tsokosoko ity. Nanamafy ny SSLC fa mampiditra am-ponja ary mampigadra ity raharahara ity. “Fandikan-dalàna ary tokony higadra ny olona tratra manondrana harena arovana tahaka izao”, hoy ny fanamafisana.
Ny Cites no miara-miasa amin’ny SSLC amin’ny ady amin’ny fanondranana an-tsokosoko toy izao. Mpikambana ao amin’ny Cites rahateo isika ary manaraka ny fepetra ifanarahana ao aminy.
Nampahatsiahy ry zareo amin’ny douane fa anisan’ny ezaka ataon’izy ireo koa ny nahazoana ireo fitaovana fanaovana vola sandoka teto amintsika, ny asabotsy teo. Efa misy ny fanadihadiana lalina mahakasika izany, ary hisy ny vokatra ho azo. Miandry ny vaovao momba izany ny rehetra.